Fanambarana ofisialy momba ny pesta ataon'ny firenena ranomasimbe indiana - Madagascar, Maurice ary Seychelles
Home » Travel Associations News » Fanambarana ofisialy momba ny pesta ataon'ny firenena ranomasimbe indiana - Madagascar, Maurice ary Seychelles
Ny minisitry ny fizahan-tany eto Madagasikara, Roland Ratsiraka, ny minisitry ny fizahan-tany any Maorisy, Anil Kumarsingh Gayan, SC ary ny minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina any Seychelles, Maurice Loustau-Lalanne dia nihaona teo amin'ny sisin'ny World Travel Tsena any Londres hanehoana hafatra iraisana momba ny fahatokisana ny fepetra noraisin'i Madagasikara handresena ny valanaretina pesta.
Ny fivoriana dia natolotry ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Taleb Rifai, nanatrehan'ny sekretera maharitra an'i Kenya Ramatoa Fatuma HirsiI Mohamed, nisolo tena ny komisionan'ny UNWTO ho an'ny Africa, ny minisitra Najib Balala.
Notsiahivin'ny minisitra fa ny firenena rehetra dia mandray ny fepetra naroson'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), ary naneho ny fahatokisany fa mandeha amin'ny làlana tsara izy ireo.
Notsiahivin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO fa tsy manome soso-kevitra ny fandrarana ny fitsangatsanganana eto Madagasikara ny WHO ary "mifototra amin'ny fampahalalana misy hatramin'izao dia toa ambany dia ambany ny loza ateraky ny fihanaky ny aretina pesta".
Fihaonana an-tampon'ny minisitra UNWTO ao amin'ny WTM London: firaketana androany!
Rivo-doza sy ny fizahan-tany any Karaiba: fanavaozana ofisialy farany feno